မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ်
၁ ဩဂုတ် ၂၀၀၂
သီလဝါ၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
16°42′11″N 96°15′51″E﻿ / ﻿16.70306°N 96.26417°E﻿ / 16.70306; 96.26417
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကိုရီးယား ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နာဂါအိုကာတက္ကသိုလ်၊ နီဟွန်းတက္ကသိုလ်၊ အဏ္ဏဝါသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုကျိုတက္ကသိုလ်
မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် (အင်္ဂလိပ်: Myanmar Maritime University) သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေကြောင်းပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြားပေးသော တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂.၂.၁ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် ဌာနကြီးများ
၂.၂.၂ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက် ဌာနများ
၂.၂.၄ အခြား ဌာနခွဲများ
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၁/၂၀ဝ၂ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာဥပဒေကို ၂၀ဝ၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက် တွင် ပြဋ္ဌာန်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်အား၂၀ဝ၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ရက် တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်မလိုက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရေကြောင်းသိပ္ပံကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ ယာယီဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၄ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ရက် တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ကို ခေတ်မီသော ပုံစံဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အပ်နှင်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသောရေ ယာဉ်တည်ဆောက်မှုဗိသုကာများ၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ ရေကြောင်းလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာများ၊ မြစ်ချောင်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ရေကြောင်းအရာရှိ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိရောက်မှုရှိသော ရေကြောင်း ပညာရပ်များနှင့် လေ့ကျင့်မှုကိုရရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (IMO) ၏ STCW 95 Convention ကို အခြေခံ၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးဇယားများကို ရေးဆွဲထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်ကို အောက်ပါအဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အရာထမ်း - ၂၄၈ ဦး
အမှုထမ်း - ၅၈၃ ဦး
စုစုပေါင်း - ၈၃၁ ဦး
ဤတက္ကသိုလ်တွင်အဓိကဌာနကြီး (၂) ခုရှိသည်။
ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် ဌာနကြီး (၆) ခု၊
ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက် ဌာန (၂) ခုနှင့်
အထောက်အကူပြုဌာန (၇) ခုရှိသည်။
ရေကြောင်းပညာဖြင့်နိုင်ငံတော်ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်
ရေကြောင်းပညာဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတို့ကို သင်ကြားပေးနိုင်ရန်
ရေကြောင်းပညာရပ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် လိုအပ်သည့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်မှ ချမှတ်ထားသည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရေကြောင်းပညာရှင်များ သိရှိနားလည် နိုင်စေရန်
ရေကြောင်းပညာရပ်များဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည့်သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ လေ့လာသောနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန်
နိုင်ငံအတွက် ကျယ်ပြန့်သော ရေကြောင်းပညာရပ်များဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဆက်အသွယ်အတွက် ထိရောက်သောရေကြောင်းပညာရပ်များလေ့ကျင့်ပေးမှုများ ထူထောင်ရန်
လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စီမံခန့် ခွဲမှုနည်းပညာရပ်များကြား ရှင်းလင်းသော ဆက်သွယ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်
ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှုဗိသုကာဘွဲ့ ၅ နှစ် B.E (NA)
ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၅ နှစ် B.E (ME)
ရေကြောင်းမက္ကနစ် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၅ နှစ် B.E (MM)
ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၅ နှစ် B.E (PH)
မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၅ နှစ် B.E (RC)
ရေကြောင်းလျှပ်စစ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၅ နှစ် B.E (MESE)
သိပ္ပံဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးတန်း) ရေကြောင်းသိပ္ပံ ၅ နှစ် B. Sc (Hons;)(NS)
သင်္ဘောလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ ၂ နှစ် Dip. SM.
ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ ၂ နှစ် Dip. PM.
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေ​ကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် အနည်းဆုံးရမှတ် ၄၈၀နှင့်အထက် ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊​ကျောင်းသူများ များလျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မျက်စိစစ်ဆေးခြင်း ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
အထူးပြုဘာသာရပ် အလိုက် သင်ကြားမှုကို ဒုတိယနှစ်တွင် စတင်သည်။ ကျောင်းသား တစ်ဦးချင်း၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့် ပထမနှစ်သင်တန်း၏ ရမှတ်ပေါ်မူတည်၍ အထူးပြုဘာသာရပ် ရွေးချယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ သင်ရိုးပြီးဆုံးရန်လိုအပ်သောလက်တွေ့သင်တန်းများပြီးဆုံးပါကနှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရသည်။ ၎င်းနှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကိုကျေနပ်စွာဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါကအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ရေယာဉ်တည်ဆောက်မှု)(NA)၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ (ME)၊ရေကြောင်းလျှပ်စစ်(MESE)၊ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ(PH)၊မြစ်ချောင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (RC)နှင့် သိပ္ပံဘွဲ့(ဂုဏ်ထူးတန်း)ရေကြောင်းသိပ္ပံ (NS)တို့ကိုအပ်နှင်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်နှစ် (၁) နှစ်တွင် နှစ်ဝက်သင်တန်းကာလ (၂)ခုရှိပြီး၊ တစ်ခုစီတွင် စာသင်ချိန်၊ လက်တွေ့ချိန်၊ ရက်သတ္တပတ် (၁၇) ပတ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် (၂) ပတ် (သို့မဟုတ်) (၃) ပတ်၊ စုစုပေါင်း ရက်သတ္တပတ် (၂၀) ရှိသည်။ ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲပြီးပါကအားလပ်ရက် (၂) ပတ်ရှိပြီးနှစ်ကုန်၍အတန်းတင်စာမေးပွဲ ပြီးလျှင် လက်တွေ့သင်တန်းရှိသည်။ ဘာသာရပ် (၁) ခုစီ၏နည်းပြရမှတ်နှင့် လက်တွေ့ စာမေးပွဲရမှတ်များကို နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ (၂) ခုစလုံးတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ အကဲဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းခေါ်ချိန်အနည်းဆုံး (၇၅%) နှင့်လက်တွေ့ စာသင်ချိန် (၁၀ဝ%) ကျောင်းခေါ်ချိန်ရှိမှသာ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရှိသည်။
↑ Myanmar Maritime University။ Ministry of Transportation။ 10 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-11-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ http://monnews.org/?p=924 | Myanmar Maritine University gaining popularity
↑ History of MMU။ Ministry of Transportation။ 21 November 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-11-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်&oldid=718542" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။